The Mohican Comes Home (2016) The Mohican Comes Home (2016) =====================တိုကျိုမှာကျင်လည်ပြီး ၇ နှစ်ကြာမှ မိန်းမနဲ့အတူ မိဘဇာတိမြို့ကိုပြန်လည်တဲ့ မိုဟီကန်ဆံပင်ကေနဲ့ရောခ့်အဆိုတော်တစ်ယောက်အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ် ..အိမ်ပြန်ရောက်သွားချိန်မှာ ရန်သူလိုဖြစ်နေတဲ့အဖေက ကင်ဆာဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးအဖေ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်က ဟာသကားဆိုပေမဲ့ ဗရုတ်သုတ်ခလုပ်တာတွေ၊ အတင်းလုပ်ယူ‌တာတွေလုံးဝမပါပါဘူး .. သူတို့ခပ်တည်တည်လုပ်ပြနေတာတွေ၊ ပြောနေတာတွေ၊ ဒါရိုက်တာရဲ့သွယ်ဝိုက်ပြီးဇာတ်လမ်းပုံဖော်တာတွေက ရယ်မောနေရပြီး တော်တော်လေးလည်းချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ် .. ဆူဆူညံညံဟာသတွေမကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့တလွဲတွေလုပ်ပြတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကို‌သေချာပေါက်အကြိုက်တွေ့မှာပါ...(ဇာတ်ကားနဲ့အညွှန်းကို Nay Lin Thar မှ ပြန်ဆိုရေးသားထားပါတယ်)Size - 1.6GB, 1GB Quality - 1080p, 720p IMDb Rating - 6.7/10 Format - mp4 Duration - 2H 5Min Type - Comedy Subtitle - Myanmar Subtitle (Hardsub) Translated by Nay Lin Thar Encoded by Y
Miss Stevens (2016) Miss Stevens (2016) =============တစ်ယောက်ယောက်ကိုများစောင့်နေတာလား...ဇာတ်ကားရဲ့အစမှာ ဆရာမ Miss Stevens ကတော့ ဇာတ်ရုံထဲမှာထိုင်ပြီး ကြေကွဲနေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကတော့နောက်ပိုင်းမှာသိရမှာပေါ့။Miss Stevens က ဘဝမှာ အဆင်မပြေမှုတွေကိုမျိုသိပ်ထားရင်း တာဝန်‌ဝတ္တရားတွေအပြည့် ခေါင်းထဲမှာ‌ထည့်ထားတဲ့ ဆရာမတစ်‌ယောက်ပါ။ တစ်နေ့မှာ သူ့တပည့် သုံးယောက်ကို သရုပ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲအတွက် လိုက်ပို့ရပါတယ်။ ဒီ သရုပ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲက ဆုရလာမှလည်း ကျောင်းအတွက် အနုပညာ ရန်ပုံငွေပြန်လာရရှိလာမှာဆိုတော့ တပည့်သုံးယောက်ကလည်း အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ့်ပုံပါပဲ။ခရီးအတွင်း တစ်ညမှာတော့ Miss Stevens ကို Billy က နာမည်အရင်းဖြစ်တဲ့ ရေချယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်မိလိုက်တာရော၊ မာဂေါ့ရဲ့စကားမှားတာတွေရောကြောင့် စိတ်ကွက်သွားပါတယ်။ ဒီတင်မှာ ဘီလီက Miss Stevens အခန်းကိုလိုက်သွားပြီး နှစ်သိမ့်ပေးပါတယ်။ သူနဲ့ Miss Stevensက တစ်ယောက်ကို တစ်‌ယောက် နှစ်သိမ့်ပေးမှအဆင်ပြေနိုင်မယ့် အထီးကျန်နေတဲ့ လူနှစ်ယောက်မှန်း ဘီလီကသိပေမယ့် Miss Stevens ကတော့ဝန်မခံပါဘူး။Miss Stevens အဖြစ် Lily ...
Dangal (2016) Dangal (သို့မဟုတ်) အောင်မြင်မှုရဲ့ ခရီးကြမ်း"နပန်းသမားတစ်ယောက်က ကွင်းထဲဝင်လာပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က နိုင်ငံအတွက်ဆုတံဆိပ်ရယူပေဖို့အတွက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံကတော့ နပန်းသမားတွေကို ဘာမှကူညီထောက်ပံမှုမလုပ်ပေးဘူး။"ဒီစကားကိုပြောတာက နပန်းအားကစားနည်းကို အသွေးအသားထဲကရူးသွပ်ပြီး နပန်းကစားနည်းကနေ နိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုရပေးချင်တဲ့ Mahavir Singh Phogat (Aamir Khan)၊ဒါပေမဲ့ သူ့ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့ဘူး။ဝါသနာနဲ့ ဝမ်းစာ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဝါသနာကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရပေမယ့် သူ့မှာရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်။သူမွေးတဲ့သားက တစ်နေ့နပန်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။ကံကြမ္မာကတော့ သူ့ကိုကျီစားနေတုန်းပဲ။အနှစ်နှစ်ကာလမျှော်လင့်ချက်နဲ့ သားတစ်ယောက်လိုချင်တဲ့သူ့အတွက် ပထမဆုံးမွေးလာတဲ့ကလေးကတော့ မိန်းကလေး၊စိတ်အပျက်ကြီးပျက်ခဲ့ရပေမယ့် ဇွဲမလျှော့တဲ့သူကတော့ နောက်မွေးမယ့်ကလေးကယောကျာ်းလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဒီလိုနဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ၊ဆေးပေါင်းစုံမှီဝဲရင်း ယောကျာ်းလေးရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ဒီတစ်ခါလည်းမွေးလာတာကလည်း သမီးမိန်းကလေး၊စိတ်ဓာတ်ကျစဖြစ်လာပေမယ့် သားယောကျာ်းလေးမွေးလာနိုးနိုးနဲ့ ကလေးတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်မွေးလာခဲ့တာ ၄ယောက်မြောက်ထိရောက်လာပေမယ့် အကုန်လုံးကတော့သမီးမိန်းကလေးတွေသာ၊ဒီလိုနဲ့ Mahavir တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ရွှေတံဆိပ်ရယူရေး ရည်မှန်းချက်တော့ စွန့်လွှတ်လိုက်ရပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့.......တစ်ရက်သူအိမိပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ သူ့သမီးအကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Geeta နဲ့ Babitaက ကျောင်းကအပြန် လမ်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကို လိုက်နှောက်ယှက်တဲ့ ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကို ထိုးကြိတ်လွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Mahavir တစ်ယောက် သူရဲ့နပန်းသွေးတွေက သူ့သမီးတွေဆီမှာလည်း စီးဆင်းနေတယ်ဆိုတာသိပြီး ...
The Wailing (2016) The Wailing (2016) IMDb - 7.5/10_______Rotten - 99% တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တစ်နေရာမှာ တည်ရှိတဲ့ ကျေးရွာလေးတစ်ခုမှာ ဇာတ်လမ်းကို စတည်ထားတယ်။ ထိုရွာလေးနာမည်ကတော့ Goksung တဲ့။ ထိုမြို့လေးဟာ အတော်အတန်သင့် သာယာတဲ့ရွာလေးဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့။ တောတွေ တောင်တွေနဲ့ကာရံထားပြီး မြစ် ချောင်း အင်းအိုင်လေးတွေလည်း ရှိတော့ ပိုအေးချမ်းတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ခုရက်ပိုင်းမှာ ရွာထဲကို Japanese အဖိုးကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကောလဟာလတွေ ထွက်လာတယ်။ မိုးတွေစွေနေတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ အာရုဏ်ဦးဟာ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်မောကျနေတဲ့ ရဲသား Jong-goo အတွက်တော့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတစ်ခုပဲ။ မနက်စောစော ရွာထဲမှာ လူသေမှုဖြစ်လို့ဆိုပြီး သူအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကို သွားရောက်ခဲ့သောအခါ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက စိတ်ခြောက်ခြားစရာပါ။ သွေးတွေသံတွေနဲ့ရဲရဲနီနေတဲ့ လူ့အလောင်းတွေ နဲ့အရာရာကို သိနိုင်နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့ မိသားစုဝင် လူသတ်သမားတစ်ယောက်။ အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးတွေဟာ သူတို့ရွာမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ ဆေးစစ်ချက်တွေအရနဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်တော့ သူတို့ရွာမှာ ...
Meet the Blacks (2016) Meet the Blacks (2016)=================IMDb Rating - 4.8/10ခင်ဗျားတို့ကို ၁၂ နာရီတိတိ ကြိုက်တာ လုပ်ခွင့်ပေးမယ်? အဲဒီ ၁၂ နာရီအတွင်းမှာ လူသတ်ချင်လည်း သတ်၊ခိုးချင်လည်း ခိုး၊ ဘယ်ဒုစရိုက်မှုမဆို လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူကမှလည်း အရေးယူခွင့်မရှိဘူး။ ဒါဆို ဘာလုပ်မလဲဒီလို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ပေးထားခြင်းကို Purge (သုတ်သင်ခြင်း)လို့ ခေါ်သဗျ။တရားမမျှတသူတွေ မကောင်းတဲ့သူတွေကို လောကကြီးက ရှင်းထုတ်ဖို့ရာ နှစ်စဉ် တရားဝင် သတ်မှတ်ထားတာမျိုးပေါ့ကားလ် ဘလက်ခ်ဆိုတဲ့ လူညစ်ကတော့ ဒီကိစ္စကြီးကို ရှောင်နိုင်ဖို့ သူနေတဲ့ ချီကာဂိုကနေ မိသားစုနဲ့ လစ်ထွက်အရှုပ်ထုတ်တွေချန်ခဲ့ပြီး ဘီဗာလီဟေးဘ်ဆိုတဲ့ လူဖြူတွေချည်းရှိတဲ့ အရပ်ဒေသတစ်ခုမှာ လာအခြေချလေရဲ့။ ကံဆိုးချင်တော့ လူဖြူရပ်ကွက်က လူမည်းကို အလိုမရှိ အတိတ်က နောက်ကြောင်းမရှင်းခဲ့တာတွေကလည်းနေရာသစ်ထိ လိုက်လာ . ၁၂ နာရီတိတိ ရမ်းကားချင်သလို ရမ်းကားလို့ရတဲ့ Purge ဆိုတဲ့ သုတ်သင်ခြင်းနေ့နဲ့တည့်တည့်ကြီး ...
Fan (2016) မင်းသားကြီး ရှရွတ်ခန်း နှစ်ကိုယ်ခွဲသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Action, Drama, Thriller ဇာတ်ကားလေးပါ။နာမည်ကျော်မင်းသားကြီးတစ်ယောက် နဲ့ အဲဒီမင်းသားကို အသည်းအသန်ကြိုက်တဲ့ Hardcore Fan လူငယ်လေးနေရာ နှစ်နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။မင်းသားကို ကြိုက်လွန်းလို့ လုံးဝကို ပုံတူကူးပြီး တစ်ထပ်တည်း သရုပ်ဆောင်ပြနိုင်တဲ့အထိကို ရူးသွပ်တာပါ။သရုပ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ပထမဆုရခဲ့ပြီး အဲဒီဆုကို သူ့ရဲ့ မင်းသားမွေးနေ့အမီ ပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပြီး တွေ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့Idol တွေနဲ့ Fan တွေနဲ့ တွေ့တဲ့ထုံးစံအတိုင်း သူ့ရဲ့စိတ်ကူးထဲက အတိုင်း ဖြစ်မလာဘူးပေါ့။နောက်ထပ် Action တွေ Thriller တွေဆက်ဖြစ်လာတာကို ဇာတ်ကားထဲမှာ ကြည့်ပါတော့။တစ်ယောက်တည်းက လုံးဝ မတူညီတဲ့ ဇာတ်ရုပ်နှစ်ခုကို လုံးဝ သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက် သရုပ်ဆောင်ထားသလို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။အသက်ချင်းထက်ဝက်လောက်ကွာတဲ့ နေရာနှစ်ခုကနေ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ရှရွတ်ခန်းရဲ့ အရည်အချင်းကတော့ထူးချွန်တယ်ဆိုတာထက် ပိုတော်တယ်လို့ ပြောနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဒီဇာတ်ကားရဲ့ IMDb Rating ကတော့ 7/10 ...
Suicide Squad (2016) EXTENDED Hype တွေများလွန်းလို့ တကယ့်ဇာတ်ကားထွက်လာတော့ထင်သလောက်ခရီးမရောက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားကိုဘယ်လိုဘယ်ပုံတွေကောင်းကြောင်း ဆိုးကြောင်းထပ်ပြီး မညွှန်းချင်တော့ပါဘူး။မျှော်လင့်ထားသလောက် ဖြစ်မလာပေမယ့်မကောင်းဘူးလို့တော့လဲလုံးဝပြောလို့မရတာတော့အမှန်ပါဒါ့ကြောင့် ဇာတ်လမ်းသွားလေးပဲ နည်းနည်းညွှန်းပေးပါရစေ။ဇာတ်ကားကို Batman နဲ့ Supermanရဲ့တိုက်ပွဲအပြီးSuperman သေဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှာဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ Supermanလို လူစွမ်းကောင်းမျိုးသာ ဆိုးသွမ်းတဲ့ဘက်ကနေ လူသားတွေကိုဒုက္ခပေးမယ့်Villainတစ်ဦးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာကြတဲ့အတွက်Amanda Waller ဆိုတဲ့အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့မှ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အကြံအစည်ကDC ရဲ့နာမည်ကျော် Villainsကြီးများနဲ့အဖွဲ့တစ်ခုထူထောင်ပြီး အစိုးရအနေနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စများကိုသူ့ရဲ့Task Force X ခေါ် Suicide Squad အဖွဲ့ကိုလွှတိပြီးဖြေရှင်းစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။Amanda ရဲ့ အကြံအစည်အောင်မြင်မလားဒီvillainsကြီးတွေကိုရောသူထိန်းချုပ်နိုင်ပါ့မလားSuicide Squadအဖွဲ့သားတွေကရောဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ရမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်ကားထဲမှာပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားပေးပါခင်ဗျာ။မညွှန်းတော့ဘူးဆိုပေမယ့် တစ်ခုလေးပြောပြစရာရှိပါသေးတယ် :-Pဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက အားသာချက်တစ်ခုကတော့ characters ကိုက်ညီမှုရှိတာပါပဲအထူးသဖြင့်Deadshot အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Will Smith နဲ့ရေပန်းစားနေတဲ့ Harley Quinn အဖြစ်Margot Rubbie တို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်မှုတွေကတော့ ပရိတ်သတ်အထူးကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကျိန်းသေပေါက် အာမခံရဲပါတယ် ။Joker အဖြစ် အများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Jared Letoကိုလဲ သူပါသမျှဇာတ်ဝင်ခန်း များအရသုံးသပ်ဖို့ခက်ခဲနေသေးပေမယ့် မဆိုးဘူးလို့တော့မြင်မိပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ...